Talooyin iyo waxyaabo kale oo qoorta looga ilaalin karo dhaxanta | Ragga Stylish
Sidee looga ilaaliyaa qoortaada qabowga?
Xilliga jiilaalka Mudnaanta marka lebisku noqdo hoyga heerkulka hooseeya. Taas macnaheedu maaha inaan ku bixinno qaab ama xarrago.
Si qoortaada looga ilaaliyo dhaxanta fursadaha waa kala duwan yihiin qaar badan oo ka mid ahna xitaa hoose.
1 Garbasaarka: xulafada ugu fiican ee qoortaaga ka ilaalinaysa dhaxanta
2 Qoorta diirran
3 Funaanad Turtleneck
Garbasaarka: xulafada ugu fiican ee qoortaaga ka ilaalinaysa dhaxanta
Scarves ayaa suuqa ku jiray ilaa Giriiggii hore. Waqti ka dib, dharkan ayaa noqday mid aan looga maarmin xirashada jiilaalka. Waxay sidoo kale kala duwanaatay oo ku kasbatay xarrago.
Maanta waxaa lagu soo saaray qalab kala duwan: dhogor, cudbi, tolmo iwm. Waxay sidoo kale aad u badan yihiin, waxaa loo isticmaali karaa qaabab aan caadi ahayn iyo kuwa aan rasmi ahayn ama dharka gala. Isugeynta iyaga jaakadaha, shaatiyadaha, galoofyada ama koofiyadaha sidoo kale ma ahan mid aad u dhib badan.
Laakiin wixii ka sarreeya oo dhan iyo dembiga sida pragmatists, waa kuwo aad waxtar u leh inay qoorta ka ilaaliyaan qabowga.
Ikhtiyaar inala socday muddo dheer. Wax ku ool ah, bilic leh oo aad u raaxo leh.
Kuwa aan rabin inay dareemaan adkaanta qabowga waxay saameyn ku yeeshaan xarigooda codka, laakiin iyagoo aan xirneyn garbasaar, turtleneck waa bedel fiican. Sidoo kale loo yaqaan turtleneck ama turtleneck, dharkaan, marka lagu daro muuqaalka weyn, waa kuwo aad wax ku ool u ah marka qabowgu uusan ahayn mid baraf ah
Iyada oo la muuqaalka dharka maaddada syntheticQaar ka mid ah dharkaasi waxay ku adkeyn karaan maqaarka iyaga oo aan keenin wax dhib ah.
Dhaqdhaqaaq badan inta lagu jiro xilliga qaboobaha - dayactirka nashaadaadka jirka marwalba waa muhiim - dhididka ayaa ah dharka ugu habboon. Waxay ka caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa kuleylka jirka laakiin iyada oo aan la nuugin dheecaannada jirka ka soo baxa. Si kastaba ha noqotee, joogitaanka sida ugu macquulsan ayaa muhiim u ah ka fogaanshaha inaad ku dhacdo dhibanaha weerarada qabow.
Qaar badan oo ka mid ah dhididka ayaa leh qoorta iyadoon loo eegin inay furan yihiin ama leeyihiin xirmo bartamaha laabta, sidaas darteed cunaha iyo xadhkaha codku waa la ilaalin doonaa.
Laakiin tan Waa dhar ka baxsan hawlaha isboortiga. Maanta waxay si qumman isugu dhafan karaan iyagoo ah udub dhexaad muuqaal aan rasmi ahayn.
Ilaha Sawirka: YouTube / alliexpress.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Sidee looga ilaaliyaa qoortaada qabowga?
Xilliga jiilaalka waa lama huraan, in markaa hargabyada iyo hargabku yimaadaan. Xilligan, funaanadaha turtleneck iyo funaanadaha qoorta ee maqaarka ayaa aad moodada, oo aad hilmaantay haha. Hab wanaagsan oo loo maro kan ugu dambeeya oo aanad dayacin caafimaadkaaga.
Naag maxay ka wadaa markay dhahdo ...?
Afar jiinis oo toosan oo jiilaal ah